Home Wararka Yaa ku tartamaya doorashada kursiga HoP#058 ee Baladweyne?
Yaa ku tartamaya doorashada kursiga HoP#058 ee Baladweyne?
Guddiga maamulka doorashada ee dowlad Goboleedka Hirshabeelle ayaa Maanta lagu wadaa in ay Magaalada Beledweyne ku qabtaan doorshada kursiga Hop#058 oo ay ku tartamayaan musharrixiin farabadan.
Shalay ayaa loo madal sanaa in la qabto doorashada balsa dib ayay u dhacday,waxana hada Beledweyne ka socodo qaban qaabada doorashada kursigasi, Musharaxiinta ku tartami doono kursiga doorashadiisa la qabanayo ayaa kala ah
1: Cabdullaahi Maxamed Cali (Sanbaloolshe).
2: En, Yoonis Maxamed Nuur.
3: Cali Cabdullaahi Cosoble.
4:Cabduqaadir Xuseen Coloow.
5: Maxamuud Afdhuub Makaraan
6: Cabdullaahi Axmed Xuseen
7: Ubax Cali Sheegow
Hirshabeelle ayaa wali waxa ku harsan kuraas dhowr ah oo an wali la qaban doorashadooda.iyadoo lagu wado in ugu dambeeyn 15-bisha soo socoto la soo gaba gabeeyo doorashada xildhibannadana la dhaariyo si ay wajibkood u gutaan
Previous articleWasiir hore oo muujiyay tuhim dilka Xil. Aamino, kuna baaqay baaritaan caalami ah
Next articleAl Shabab oo sheegtay inay weerar ku qaadeen Ciidamada Kenya
Khilaafka MW Farmaajo iyo RW Kheyre oo cirka isku shareeray kaddib...
[AKHRISO] Wasiiru-dowlihii Maaliyadda DFS oo laga xiray kursigii Xildhibaan ee uu...